07. Mawlamyaing – Kyike Kame – Satse (5 Days –4Nights) – Holiday Channel
Home>Trips>07. Mawlamyaing – Kyike Kame – Satse (5 Days –4Nights)
07. Mawlamyaing – Kyike Kame – Satse (5 Days –4Nights)
မော်လမြိုင် – ကျိုက်ခမီ – စက်စဲ (5 Days –4Nights)
Day1 – ရန်ကုန် – မော်လမြိုင်
စုရပ် Myanmar Cute ရုံးခန်းမှ ညနေပိုင်းတွင် မော်လမြိုင်သို့ကားစတင် ထွက်ခွာပါမည်။ ညလည်စာကို On The Way ရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။
Day2 – မော်လမြိုင် – ကျိုက်ခမီ – စက်စဲ
မော်လမြိုင်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက် နံနက်စာဖြင့်ဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်သို့ Check- In ဝင်ပြီး ခေတ္တအနားယူပြီးနောက် ကျိုက်ခမီသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာပါမည်။ ကျိုက်ခမီရေလည်ဘုရားသို့ သွားရောက် ဖူးမြော်ပြီးနောက် ပျော်ရွှင်စွာရေကစားကြပြီး အပန်းဖြေအနားယူပါမည်။ ဆက်လက်၍ မော်လမြိုင်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး သံလွင်မြစ်အလှကို ကြည့်ရှု၍ မော်လမြိုင်ကမ်းနားလမ်း သို့ လမ်းလျှောက်အနားယူပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။
Night Over – မော်လမြိုင်ရှိဟိုတယ်
Day3 – မော်လမြိုင်
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ် ဘုရားများ ဖြစ်သော ကျိုက်သုတ်ဘုရား၊ ဦးခန္တီဘုရား၊ လက်(၆)ချောင်းဘုရား၊အထင် ရှားဆုံး ဖြစ်သော ကျိုက်သံလန်စေတီသို့ သွားရောက် ဖူးမြှော်ပါမည်။ ထို့ နောက် မွန်ရိုးရာအကများကို လေ့လာနိုင်ရန် ရှင်စောပုဘုရင်မကြီး၏ ဥသျှောင်အစစ်ရှိရာ မွန်ပြတိုက်သို့ သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ဆက်လက် ၍ မြို့ပေါ်ရှိ နှစ်ထပ်ဈေးကြီးသို့ သွားရောက်၍ ဒေသထွက်ကုန်များအား ဝယ်ယူပါမည်။
Day4 – မော်လမြိုင် – စက်စဲ – ရန်ကုန်
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မော်လမြိုင်မှ နာမည်ကျော် စက်စဲကမ်းခြေသို့ သွားရာက်အပန်းဖြေပါမည်။ လမ်းခရီးတွင်ရှိသော မုဒုံလျောင်းတော်မူဘုရားကြီးအား ဝင်ရောက်ဖူးမြှော်ပါမည်။ ဘုရားကြီး ကိုယ်တော်အတွင်းသို့ လှေကားများဖြင့် တက်ရောက် ဖူးမြှော်နိုင်ပါ သည်။ စက်စဲသို့ရောက်ရှိပြီးနောက် ကမ်းခြေတွင်ပျော်ရွှင်စွာရေကစား အပန်းဖြေပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပါမည်။
Day5 – ရန်ကုန်
နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ချောမောစွာပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။